Manokatra fivarotana paty “Martial Arts Master”, fomba haiady haiady sinoa voajanahary | Asa Vaovao Yiding - Faucets an-dakozia tsara indrindra 2021 | Faucets efitra fandroana tsara indrindra | WOWOW Faucets
Home / Interior design / Manokatra magazay Noodle, «Art Martial arts martial» Asa Vaovao Yiding
Manokatra magazay Noodle, «Art Martial arts martial» Asa Vaovao Yiding
2021 / 05 / 29 FisokajianaInterior design 5348 0
Brand VIS + Famolavolana habakabaka
Ny tranga "Wugong Niu" dia tetik'asa famolavolana marika an'ny Yiding Design. Wugong Niu ”dia napetraka ho mpandova sy mpandefa ny paty miompy omby any Lanzhou. Izy io dia manasongadina ny fiandohan'ny marika na ny fanavaozana ramen. Ny volavolanay dia hamboarina amin'ny lafiny maro: tantara, lozika marika ary tsipika tantara, lozisialy fandraharahana, ary fifandraisana an-tsary.
Raha ny fomba fijery ara-tantara dia namelana eraky ny firenena ny “Lanzhou Ramen”. Fa ny Lanzhou eo an-toerana, Gansu dia mbola tsy naheno an'izany, ary ny fomba marina hanokafana fivarotana paty any an-toerana dia - "Lanzhou Beef Noodle Shop". Taorian'ny fampahalalana ara-tantara maro, niaraka tamin'ny teôria momba ny fifandraisana sy ny orinasa maoderina, dia voafaritra ihany ny làlana lehibe indrindra.
Manomboka amin'ny marika Wugong Cow, ny fototry ny tantara dia napetraka tao amin'ny Wulin Inn. Mba hanamafisana ny fahatsapana ny "Wugong" ho an'ny mpanjifa sy hanamorana ny fifandraisana voajanahary miaraka amin'ny marika, dia namboarina ny sary IP fomba haiady haiady: Jinbao. Tokony ho fantatra ny seho tantara mba hananany herinaratra fifandraisana tsara kokoa. Manambatra ireo singa ao amin'ny "haiady, ramen ary omby", ary zava-dehibe ny hanomezana toetra sy safidy an'i Jinbao.
Ny tantara dia momba ny mpiady iray, Jinbao, izay nandresy ny mahery fo rehetra tamin'ny fifaninanana tao amin'ny Three Terrace Pavilion tao Lanshan Mountain ary nahazo ny anaram-boninahitra tompon-daka tamin'ny tontolon'ny haiady tamin'ny fahaizany haiady, ilay “Fomba fito an'ny omby ”. Eo ambany fitarihany, toetr'andro vaovao amin'ny fanambinana sy fitoniana ao Jianghu. Rehefa afaka am-polony taona maro, Jinbao nisotro ronono taorian'ny nahombiazany. Nanokatra fivarotana paty miendrika haiady tamin'ny haiady teo am-pototry ny Mount Lan izy, ary nampiditra ny hetsika haiady fito tany am-boalohany ho amin'ny fanaovana paty.
Ity tranga ity dia manaisotra ny "mena, mavo, manga sy volondavenona" avy amin'ny trano fandraisam-bahinin'ny ady haiady ho toy ny loko lehibe an'io toerana io. Ireo singa nentin-drazana toy ny "haves manidina, varavarana miampita, latabatra toradroa ary dabilio" dia nalaina avy tamin'ny maritrano taloha mba hamoronana trano fisakafoanana paty hena sinoa, tsotra sy mahafinaritra. Ho an'ity fivarotana paty miendrika haiady haiady ity dia nanao fanavaozana vaovao ihany koa i Jinbao. Ny sary vaovao dia mandinika bebe kokoa ny tanjaka sy ny verve, ary ny dikanteny hita ao amin'ny tanànan'i Lanzhou fahiny dia miara-mamadika ny tantaran'ny mpiady.
Miditra ao amin'ny trano fisakafoanana, ny tile vita amin'ny glazy eo ambanin'ny saina dia mihetsiketsika, lalana vita amin'ny rivotra haiady. Ny sehatra dia natokana ho an'ny fifandraisana eo amin'ny chef ramen arts martial sy ny fisakafoanana. Ny fomban-drazana tondra-dronono voninkazo sinoa manjelanjelatra dia mihemotra ho toy ny dikantenin'ilay takelaka. Ao anatin'ny trano fisakafoanana, ny zana-kazo izay manamora ny firafitry ny maritrano dia voalahatra araka ny filaharana. Ny taila porselana manga dia manindrona karazana fiainana hafa amin'ny habakabaka. Ny lanterne mioliva boribory boribory mampifandray ny trano fisakafoanana ambony sy ambany. Ireo latabatra sy dabilio tsy mety maty valo no fenitra amin'ny sarimihetsika haiady.
Mijere manodidina ary miverina miverina amin'ny fotoana. Ireo sakana mena eo amin'ny valindrihana dia mifandona amin'ny sokay maitso amin'ny taila rindrina, ary ny sary fotsy dia mampiseho ny fihetsika 7 an'ny haiady. Natao tamim-pitandremana ny habaka mba hifanaraka amin'ny toetoetran'ny paty henan'i Lanzhou "iray mazava, roa fotsy, telo mena, efatra maitso".
Mipetraka eo ambony latabatra ilay mpiady. Rehefa miditra amin'ny sehatra sinoa mampitolagaga ao amin'ny “Wu Kung Niu” ianao, dia tsy afa-mihetsika ny mpihinana raha mankafy ny ramen manitra sy mampatsiahy ny fomban-drazana ny paty hen'omby misy an'i Lanzhou. Tanàna iray, lovia iray ny paty. Amin'ny lafiny iray dia misy fampisehoana ramen marolafy amin'ny tsiro, ary amin'ny lafiny iray hafa dia misy ny toetr'andro chivalrous ao amin'ny sehatra sinoa. Fanandramana vaovao amin'ny lovia paty misy ramen no ao amin'ny Wugong Niu - Beef Ramen Restaurant.
Anaran'ny tetikasa: Wugong Niu
Faritra azo ampiasaina: 160㎡
Toerana: No. 68 Tianshui North Road, Distrikan'i Chengguan, Lanzhou City (rihana faha-4 amin'ny Wanda Shopping Mall)
Fitaovana ho an'ny tetik'asa: biriky maintso, bara varahina, loko mena, taila manjelanjelatra, sns.
Saripika momba ny tetikasa: Jiangnan
Orinasa mpamorona: Shenzhen Yiding Decoration Design Co.
Previous :: Geometry + Loko mafana sy mangatsiaka, manamboara fihetsem-po aesthetic madio | Haili Design Next: Loko simenitra, andalana plastika, marbra, vera, fandikana maro amin'ny fomba maoderina!
2021 / 08 / 15 3501
2021 / 08 / 15 4382
2021 / 08 / 15 3872
2021 / 08 / 14 3600
2021 / 08 / 14 4041
2021 / 08 / 14 3402